Sacad Maxamed Cali Dhalaan Uu Dulmiyay Masuulkii Difaaci Lahaa.
Sacad Maxamed Cali Dhalaan Uu Dulmiyay Masuulkii Difaaci Lahaa.
Monday April 03, 2017 - 16:24:47 in by Samiir Cabdi
Sacad yare, waa wiil yaroo ay kudhac day dayac caafimaad (Medical negligence), waxauu ka jabaygacansanadka 2016 bishiilabaadisagaoojoogaBurco. Waa wiilyarooahaaxaafidulquraan, da’diisunaay ahayd 12 jir. WaalidkadhalaySacad, Maxamed Cali Kildhiiyo Hooyadii Kinsi Ayaanle ayaa keenay CusbitaalkaGuud EeHargeysa sacad yare, taariikhdumarkayahayd 18/02/2016 , si qaliin loogu sameeyo gacantuna ka jabay birna loogugeliyo. Sababta qudhaee loo keenay Cusbitaalka Guud eeHargeysa waxaa ay ahayd in qoysku aaminsanaa in daryeelkacaafimaad ee Cusbitaalka Guud ee Hargeysayahay mid lagu kalsoonaan karo, aadna uga horeeya ka magaaladaBuco. 22/02/2016 oo ah sadexcasho ka dib ayaa loo diyaariyeysacadqaliinka, waana halka khal khalku ay ka dhacday masiibada illaa maanta bedeshay noloshii SacadMaxamed Cali.
Sacad yare, isagaoo soconayaaayaa la geeyey qolkaqaliinta, waxaanauu ka tegey oo ay walaaladii iyo ehelkii kale isagaoo faraxsan. Sidoo kale dhawrkii casho ee uu joogayna waxaa loo dhamaystiray baadhitaankii uu u baahnaa ee caafimaad. Waxaa la sooceliyey Sacad yare, muddo dheer ka dib, isagaoo ku jira Komma, suuxsan. Welibaaana
gacantii laga qalin, miyir la’ qalab ku xidhanyahay. Waxaa loola cararay qolka dadka aad u ildaran la geeyo. Xilligaas waalidka waxba looma sheegin, waxaana madaxa ka gayaalay dhaawac buuran oo qadaadka ah, dhawacaas oo waalidka loogumacneeyey markii danbe, in uu soo gaadhay xilli ay la tacaalayeen in ay ku xidhaan oxygen ay ka illaaween markii hore.
Aan dib ugu noqdo halkaa,waalidku markuu waydiiyey waxa xaalladan u keenay wiil kooda, waxa ay yidhaahdeen isaga oo qaba infection ayaanu irbaddii kumudnay suuxista, markaa halkaa ayaa ciladu ka timi, waxaa waalidkii yidhi kumaanu qancin oo waa idin kii u dhameeyey baadhista ee maxaa qaldamay. Muddo ka dib ay ay haddana u sheegeen in markii la suuxinayeyaan ayku xidhin oxygen, sababtu waxaaweeye dadka inta badan waxba kuma noqoto oxygen la’aanta ay ay yidhaahdeen: Sidaas awgeed, kuwa ku noqda qorshaha ku maba ay darsan!
Markii ay muddo jawaab la siin waayey, ilmihiina sidaa ayaa waxa ay u gudbiyeen cabasho hay’adda Xirfadlayaasha Caafimaad taariikhduna markayahayd, 31/03/2016, warbixin tiixirfadlayaasha ma ahayn mid ay ku qanceen qoysku. Sidaas awgeed waxaa loo saarayguddi kale oo 5 xubnood ah.Waxaana ay ahayd baadhitaan wasaaradu samaysay gudaheeda.
Akhirkii wiilkii waxaa loo soo qaaday magdhaw. Waxaana hortaagan mag dhawgii wiilka Wasiirka Madaxtooyada, Maxamuud Xaashi, oo fulin waayey heshiiskii wasaaradu la gaadhay qoyska.
QoyskuJ abuutii yo HIndiya ay ay muddo dheer wiilkooda labadhakhtar oo lagu soo qiimeeyey xaalkiisa caafimaad dawo u geeyeen. Maanta waxaa wii luu ku dhacay ( Brain damage) oo laxaadleh, waxna ku noqday masuuliyiin caafimaad oo wasaarada ka shaqeeya, Maxaa xaqqiisa wasiirku u hortaaganyahay ayaa iswaydiinleh. Maxamuud in ay ka tahay aqoon iyo in aanu dareemayn dhibta Meesha taalayaanan kala garanayn. Ummadda balaadhan ayuu u yahay masuul ubadkoodiina uu kutumanayaa xuquuqdooda, middaas u malayn mayo in uu ku badbaadayo
Mar aanu waraysanay xubno qoyska ah oo waydinaya arrinka Sacad, waa ay ka gaabsadeen, waxayse aad ugu mahad naqayaan, wasiir Xagla Toosiye iyo Agaasimaha Caafimaadka Saleebaan Jaamac, waxa ay mahad balaadhan u soo gudbiyeen madaxweynaha qaranka oo wiilka cusbitaalka ku soo booqday, waxay se leeyihiin Madaxweyne amarkaagii ma fulin ee maxaa qaldan.